XOG: Miyey kulmeen M/weynayaasha Puntland & Somaliland todobaadkan sii dhamaanaya? – Puntlandtimes
April 19, 2019 W LAASCAANO
DUBIA(P-TIMES)- Warbaahinta Soomaalida ayaa baahisay macluumaad la xariira in ay ku kulmeen magaalada Dubia ee dalka Iskutaga Imaaraatka Carabta Madaxweynayaasha maamulada Puntland & Somaliland ee Soomaaliya, oo isku haya lahaanshaha gobalada Sool & Sanaag.
Warsidaha Puntlandtimes.com wuxuu dabagal ku sameeyey xogaha la xariira kulanka labada dhinac ee lasheegay, wuxuuna xariiro kala duwan la sameeyey Garoowe & Hargeysa, si ugu yaraan xog kooban loogu helo in uu dhacay kulankaas iyo in kale.
Madaxtooyada Puntland, Saraakiil kamid ah ayaa u sheegay Puntlandtimes.com in aysan waxba ka jirin wararka sheegaya kulanka Muuse Biixi Cabdi & Siciid Cabdullaahi Deni, waxayna sheegeen in aysan isku ujeedo aheyn oo aysan kulmina.
Mar wax laga weydiiyey in ay qorsheysan tahay in ay dawladda Imaaraatka Carabtu arrimahaas ka shaqeynayso, ayay sheegeen saraakiishan in aysan waxba ka jirin oo ay dhamaadeen kulamadii Madaxda Puntland iyo Imaaraatka Carabta.
Sarkaal sare oo katirsan Madaxtooyada Somaliland ayaa u sheegay Puntlandtimes.com in aysan waxba ka jirin sheegida wararka Soomaalida ee ah in ay kulmeen ama kulmayaan Muuse Biixi & Siciid Deni, wuxuuna sheegay in aysan la kulmeyn madaxweyne ay dhul isku hayaan.
Puntlandtimes.com waxay kaloo ogaatay in uu horey marar badan u dhacay damaca ah in la wada hadalsiiyo Puntland & Somaliland, oo ay garwadeen ka ahayd Imaaraatka Carabta, uuna soo bilowday xiligii Madaxweyne Cabdiweli Gaas xukunka hayay, ayna soo cusboonadeen xiisadaha labada dhinac, balse marnaba ma dhicin in uu kulankaasi dhacay.
Majirto cid madax banaan oo xaqiijin karta sheegashada labada dhinac iyo kooxda sadexaad ee Saxaafaddu tabinteeda wax xaqiiq ah oo ku jihyesan, marka laga reebo wararka la wada qoray ee kusaabsan in kulankaas uu dhacay.
Puntland & Somaliland waxay isku hayaan maamulida gobalada Sanaag iyo Sool, waxaana marar badan ku dhexmaray dagaalo ay wali xiisadoodu taagan tahay, kuwaas oo saameynta ka dhalatay ay gaartay meel sare.
Nimay meeli u caddahay meeli ka madoow. Falsafaddii Isaaqiyada ee ay qaddiyadda “Somaliland” ku dul qotonayd iskeed ayay iminka u fashilantay oo qaarka kore ayay ka
yara nooshahay. Garxajiskii waa kuwaas ka diga rogtay oo gunaanad bay maraysaa. Sidaas oo tahay, waxaa weli ku sii mintidaya reerka Isaaqa oo dhan oogu cunsurisan ee uu isir nacaybka qowmiyadda Daarood lafaha iyo dhuuxa ka galay oo ah Habar Awasha Ibraahim Cigaal iyo Muuse Shaani ka soo jeedaan. Jeegaan ka xuub siibte oo hadda heego ayay isu beddeleen.
Waa dad uu isir nacaybku ku gaamuray oo ay falsafaddaasu ku baahday ee aan dakhsahaas ku quusan doonin. Sirtooda iyo khiyaanadooda siyaasadeed na la ma sal gaaro sidooda ba oo waa ba’naaneyaal marka ay haleelaan dad dhagartooda ka dhega la’ sida madaxda Majeerteen ee Puntland hoggaamisa ee ay Soomaalinimadu naanaabtay. In uu Biixi la faqo Deni waa marag ma doonto, qasadkiisu na waxaa weeyaan in uu sidii kuwii ka horreeyay shukaansiga siyaasadeed ku jilciyo isaga oo hoosta na deegaanada Harti ku siqaya si uu xadka ay Isaaqiyadu ku dhisan tahay u soo wada ooto. Puntland Sool iyo Cayn ayay ku ceebeysnayd oo iminkana Sanaag iyo Boosaaso qarkeeda ayaa laga shukaansan doonaa haddii aanu Deni mawqif adag iska taagin la xidhiidhka heegada.
Halista ugu weyn ee uu Biixi soo hindisay waa Oromada uu u soo wada kireystay in uu carro Harti ku weeraro oo uu Boosaaso, Garoowe, Qardho iyo Gaalkacayo ku wada tallaalo si aakhirka ay xuquuq iyo awood ku yeeshaan oo ay gudaha ka curyaamiyaan. Dhagarta Biixi doqon uu baa dhayalsada. Puntland iyo dadkeedu na halis xun bay ku jiraan.
Real Somalilander says:
Muxaa Nacas hadaaqii u dhimi Geesi laga maagay,ma inuu habaartamo ayay tamari dhaafi kari wayday
Madaxweynaha Somaliland lama kulmayo Deni wax ka jiraana ma jiraan ee waa tuhun aan xaqiiq Ku salaysnayn iyo Safarada oo iskusoo beegmay.
Somaliland wixii Somaliya Ku Saabsan waxay kala hadli Xukuumada Xamar Fadhida ee ka wakiilka ah Somaliya oo Puntland ka mid tahay.
Maxaa Pl lagala hadli,markaa Pl waxba lagma weydiinaayo Dhulka Somaliland,ee aan muranka lahayn,lagamana gorgortamayo ee Haday Dayn weydo Shaqaaqada waa layska Celin lana Sugin Xuduudka Dalka
Jabhadna waa lagu hubayn siiba Bari,galgala iyo Sool iyo Koonfurta Mudug oo la taageeri lana hubayn ilaa ay Burtinle gaadhi,oo weerara Gaalkacayo qaybta Woqooyi iskuna Fidiyan ilaa ay ka waantoobi Sheegashada Dhulkeena,xaga Garoowena yoocade ayaa la tegin, Laasqorayna Ciidan ayaa lagaga dhaqaajin ilaa ay qabsadaan Qardho iyo boosaso.
Ninkaad dhulkaaga uga maaro weydo kiisuun baa lagu qabsadaa asaga ayaa Ku daynee waa Qaacidada la raaci doono hadaanay Caqli la imaan
Warkuba waa intaas.
Marka hore Ina cawad waad salaaman tahay 100%.
Marka labaad dani inooguma jirto in uu baaba’o maamulka soomaalilaan.Waayo dad soomaaliyeed bay dhibi soo gaaraysaa.Laakiin waxaa qalada in uu maamulka soomaalilaan kala xiro dhulka iyo dadka soomaaliweeyn.War soomaali waa wada soomaali,dhulkuna ka badan ee maxaa diidaya in qofwalba meeshuu rabo ka dago soomaaliya?Waxaa diidaya dad dano gaara wata.Ugu dambayn soomaalilaan waa dal iyo dad jira waana maamul gobaleed ka mida kuwa soomaaliweeyn.
Waan kaa qaaday salaantaada diiran oo adiga na iga guddoon isla iyada oo la cadareeyay. Long time bay inoo tahay Atoore in aynu hawada dib ugu kulanno.
Atooroow, dareenkaaga nadiifta ah ee Soomaalinimo waa midda aynu dhammaantayo inta qowmiyadda Daaroodka isla ahi eedeyno sida wax u dhacayaan. War Soomaalinimadu inta ay nagu weyn tahay in muggeed ah ayay Iidoorku iyo Hawiyuhu uga aradan yihiin. Waa xaq qodobkaaga aad su’aaleysay ee ah in cid kasta oo Soomaali dhalad ahi ay xaq buuxa oo dhaxaltooyo ahi u leedahay in ay geyiyada Eebbe badiyay ee Soomaaliyeed halka ay doonto kaga noolaato. Waa na sida saxda ah haddii laguu og yahay.
Laakiin Atooroow SNM iyo USC falsafaddan muqaddaska ahi lid iyo nacab ayay ku noqdeen oo falsafad faasid ah ee cunsuriyad ku salaysan ayay tan Soomaalinimo ku boqono goynayaan. Wax kale ayaa u cad. Xaqiiqada aan ka digayo ayaa ah in jiljileeceena Soomaali jaceylka ku suntani uu nagu sababayo in deegaamadeena la kala furfuro oo tartiib la inooga la wareego. Soomaaliga buulkaaga kaa dumminaya ma buulkiisa ayaad ka filaysaa in uu caano kugu siiyo Atooroow?
War baqaha iskadhaafo ama idoor iska dhacsha hadaa tabar u wayseena isku dhiiba inta googarada haweenka gashtaan.
Raga calaacalka waa looga wanaagsanyahay.
Wacaysoow yaanu shaki kaa galin in aanay heegadu Sanaag calfan doonin maandhe oo caydaadu waa mid adiga waxa aad tahay uun aad ku muujisay.
Hartiga Sanaag iyo walaalahooda Ogaadeen ee reer Jibraahiilku si raganimo iyo geesinimo dhab ah lagu dheehay ayay huwantan yar geyigooda uga safeyn doonaan oo ay u eedsiin doonaan. Wax yar uun na dhowr.
Haddii aad adigu af Majeerteen leeyahay nagu aflagaaddeysay garaadka ayaad la’dahay ee ogsoonoow in waajibka difaaca deegaamada Puntland uu maamulka Puntland ee Majeerteenka hoggaankiisa lagu aaminay oo laguna halleeyay dusha ka saarnaa oo gabay. Waa se lagu kala baxayaa hadda ka dib. Ha sugi waayin.